> Resource > Video > Downloader Tudou: Sida loo Download Videos Tudou
Marka laga reebo YouTube, waxaa jira website kale oo weyn online video xusid mudan, taas oo ah website Tudou ee Shiinaha-tarjumto in English sida "baradhada" in "baradhada iyo sariirtiisii,". Waxay leedahay noocyo kala duwan oo badan ee videos sida taxanaha TV ruqsad, filimada ama asalka video clips uploaded by users waqti muddo dheer halka YouTube ayaa xaddidaadda ah oo 15 daqiiqo ugu videos. Laga soo bilaabo website Tudou, waxaad ka heli kartaa bidhaamaysa waxa ka socda ee Shiinaha iyo sidoo kale daawan taxanaha TV liisan leh. Laakiin marka aad rabto in aad daawato videos offline ah, waxa aad samayn kartaa? Waxaad u baahan doontaa downloader awood Tudou si ay u caawiyaan. Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) badbaadiyay aad dhibaataysan tahay inaad kala soo baxdo Tudou videos ay interface fudud, qaliin fudud iyo shaqada dajinta awood badan. Raac tallaabooyinka fudud hoose oo aad ka heli doontaa dhammaan videos ee jeebkaaga.
1 Ku rakib downloader Tudou ah
Download barnaamijka oo ku xidh. Habka loo xirxiro waa mid aad u fudud oo degdeg badan sida saaxir ah. Ka dib markii la rakibey, fadlan abuurtaan barnaamijka si degdeg ah oo aad u hesho naftaada yaqaan hawlaheeda asaasiga ah iyo interface.
Fiiro Gaar ah: Waxa jira laba nooc oo barnaamijka. Fadlan kala soo bixi barnaamijka sida uu nidaamka qalliinka of your computer ah. The sawirada soo socda ayaa ka version daaqadaha.
2 Raadi Tudou videos
Burcad browser oo fur website-ka Tudou. Daalacashada ayaa aad kala dooran karto waa IE, Firefox iyo Chrome. Raadi iyo ciyaaro video aad rabto.
Fiiro gaar ah: website Tudou ayaa lagu soo bandhigi doonaa af Shiinaha, aad u baahan tahay si aad u hesho bogga turjumay in English taas oo si fudud loo samayn karaa iyadoo Google Translate dar-on saddexda daalacashada.
Marka aad furto video Tudou ay ku ciyaaraan, aad ka maqnaan karaa button Download geeska kore ee midigta ah. Riix badhanka, iyo video ay bilaabi doonaan duuban.
Oo weliba waxa kale oo aad dooran kartaa in aad nuqulka url video oo riix badhanka URL koollada in interface barnaamijka. Markaas barnaamijka wuxuu baari karaa url iyo aad u hesho videos ka soo bixi.
Marka Videos Tudou ku dhameysan dajinta, waxaad ka heli kartaa qaybta soo bixi. Waxa kale oo aad ka dareemi kartaa in videos ka soo bixi had iyo jeer waa qaab ka mid ah .flv inta aad u leeyihiin in ay iyaga loogu badalo si uu u ciyaaro kombuyuutarrada gacanta aad. Tani waxay sidoo kale si fudud loo gaari kartaa adigoo gujinaya button badalo ku yaal dhinaca midig ee item video ee category bixi.
Fiiro gaar ah: Tudou iyo youku, labada websites video weyn ee Shiinaha ku biireen mid la magac shirkad sida youku Tudou Inc. ee 2012.